IATA: Sary mifangaro ao ambadiky ny fiakaran'ny 2% amin'ny fitomboan'ny entam-barotra amin'ny volana septambra
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » IATA: Sary mifangaro ao ambadiky ny fiakaran'ny 2% amin'ny fitomboan'ny entam-barotra amin'ny volana septambra
Novambra 5, 2018
Ny International Air Transport Association (IATA) dia namoaka angon-drakitra ho an'ny tsena fitaterana an'habakabaka manerantany izay mampiseho fa ny fangatahana, refesina amin'ny kilometatra fandefasana entana (FTKs), dia nitombo 2.0% tamin'ny volana septambra 2018, raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona lasa. Ity haingam-pitomboana ity dia somary tsy niova tamin'ny volana teo aloha fa latsaky ny antsasaky ny tahan'ny fivelarana maharitra dimy taona dia 5.1%.
Ny fahafahan'ny entana, refesina amin'ny kilometatra fandefasana entana (AFTKs), dia nitombo 3.2% isan-taona tamin'ny volana septambra 2018. Ity no volana fahafito nisesy izay nitomboan'ny fitomboan'ny fitakiana. Ny vokatra anefa dia toa mitazona.
Ny fitomboana malemy dia tohanan'ny fahatokisan'ny mpanjifa matanjaka, tontolon'ny fampiasam-bola manerantany ary ny fanitarana ny varotra iraisam-pirenena. Ny sehatry ny entan'ny rivotra anefa dia mavesatra amin'ny fanalefahana mpamily fitakiana fangatahana lehibe:
• Nisy fihenam-bidy manerantany ny boky fandefasana orinasan'ny orinasam-pamokarana - ny voalohany hatramin'ny volana jona 2017. Ny boky fandefasana entana dia nifanarahana tany amin'ireo firenena lehibe mpanondrana eran-tany tamin'ny volana septambra, afa-tsy Etazonia.
• Ny fotoana fitaterana mpamatsy lava kokoa dia taterin'ny mpanamboatra any amin'ny ankamaroan'ny Azia sy Eropa, ireo faritra varotra roa manerantany amin'ny habetsany. Midika izany matetika fa tsy dia mila firy ny hafainganana amin'ny zotram-pitaterana an'habakabaka izy ireo.
"Ny fangatahana entana ho an'ny rivotra dia nitombo 2% tamin'ny volana septambra - ambanin'ny 5.1% eo ho eo. Ny boky mihamalemy ny filaharana sy ny fotoana fandefasana ela kokoa dia manakana ny filan'ny entam-barotra amin'ny tsena nentim-paharazana maro. Fa misy vaovao tsara ihany koa. Ohatra, ny fahatokisan-tenan'ny mpanjifa matanjaka dia mifanindran-dalana amin'ny fanitarana ny varotra e-varotra iraisam-pirenena hanomezana aotra ny entan'ny rivotra. Ny hafatra lehibe kokoa ho an'ity sehatra ity dia ny filàna fanavaozana ny fizotrany. Misy fivoarana vitsivitsy amin'ny alàlan'ny làlan-drivotra an'habakabaka elektrika ho lasa antontan-taratasy tsy mandeha amin'ny làlan'ny varotra azo atao manomboka amin'ny taona 2019. Saingy misy zavatra betsaka kokoa tokony hatao amin'ny governemanta sy ny rojom-panolorana mba hampidirana ny fizotran'ny entan'ny rivotra amin'ny vanim-potoana maoderina, "hoy i Alexandre de Juniac , Tale Jeneraly sy CEO an'ny IATA.
(% isan-taona) Fizarana manerantany FTK AFTK FLF
Tsena totalin'ny 100.0% 2.0% 3.2% -0.5% 44.8%
Africa 1.9% -2.1% 6.2% -1.9% 22.2%
Azia Pasifika 36.9% 1.2% 1.2% 0.0% 55.4%
Eoropa 24.2% 1.5% 0.9% 0.3% 45.3%
Amerika Latina 2.7% 2.9% 4.3% -0.5% 34.2%
Moyen Orient 13.7% 6.6% 7.7% -0.5% 44.4%
North America 20.6% 1.5% 4.9% -1.2% 36.5%
Ny faritra rehetra dia nitatitra ny fitomboan'ny fangatahana isan-taona tamin'ny septambra 2018, afa-tsy i Afrika izay nifanaraka.
• Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Azia-Pasifika dia nahita 1.2% nitombo ny fitaterana entana tamin'ny volana septambra 2018 raha oharina amin'ny vanim-potoana iray tamin'ny taon-dasa. Nihena kely izany tamin'ny volana teo aloha. Ny toetoetran'ny famokarana malemy ho an'ny mpanondrana, indrindra any Japon, Sina ary Korea dia nisy fiatraikany tamin'ny fangatahana toy ny fanakorontanana ny asa fivezivezena noho ny asan'ny rivo-doza. Amin'ny maha faritry ny sidina mpitatitra entana lehibe indrindra, izay mitondra ny ampahatelon'ny totalin'izy ireo, dia avo lenta ny risika amin'ny fepetra fiarovana. Niakatra 1.2% ny fahaiza-manao.
• Niitatra 1.5% ny volan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka avaratra tamin'ny volana septambra 2018 raha ampitahaina amin'ny vanim-potoana mitovy taona lasa izay. Ny fahaiza-manao dia nitombo 4.9% tao anatin'ny fe-potoana iray ihany. Ny firoboroboan'ny toekarena amerikana sy ny fandaniam-bolan'ny mpanjifa tato ho ato dia nanampy tamin'ny fanamafisana ny fangatahana entam-barotra amin'ny habakabaka ka nahazo tombony ireo mpitatitra amerikana. Na izany aza, ny fangatahana entam-barotra iraisam-pirenena dia nitotongana tamin'ny volana septambra. Izany dia nanampy tamin'ny filan'ny entana isan-taona amin'ny fianjerana ambany indrindra amin'ny volana 28 hatramin'ny 1.5% tamin'ny volana septambra.
• Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka eropeana dia namoaka fiakarana 1.5% amin'ny fangatahana entana amin'ny volana septambra 2018 raha oharina amin'ny vanim-potoana iray ihany tamin'ny taona lasa. Ny fahaiza-manao dia nitombo 0.9% isan-taona. Nihena be ny fangatahana entana ho an'ny rivotra iraisam-pirenena tamin'ny septambra. Izany dia nandray anjara tamin'ny fangatahana entana an-habakabaka iraisam-pirenena isan-taona nidina hatramin'ny ambany indrindra 30 volana 1.2% tamin'ny volana septambra. Toy ny fihenan'ny Amerikana Avaratra dia tsy ho ela akory dia hilaza raha izao no fanombohan'ny fahalemen'ny fangatahana.
• Ireo mpitatitra afovoany Atsinanana dia nandefa ny fitomboana haingana indrindra any amin'ny faritra tamin'ny volana septambra 2018, miaraka amin'ny fitomboan'ny fangatahana 6.6% raha oharina amin'ny vanim-potoana iray tamin'ny taona lasa. Io dia mihoatra ny avo roa heny amin'ny hafaingan'ny fitomboan'ny faritra hafa. Misy fambara azo tsapain-tanana ny fakana ny tinady fitaterana entana an-habakabaka arahin'antoka varotra bebe kokoa mankany / avy any Eropa sy Azia. Ny fahaiza-manao dia nitombo 7.7% isan-taona.
• Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabana amerikana latina dia niaina fitomboan'ny fitomboan'ny fangatahana entana tamin'ny volana septambra 2018 2.9% raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa ary nitombo 4.3% ny fahaiza-manao. Ny sasany amin'ireo tsena madinidinika ao amin'ny faritra dia nahita fitomboan'ny volan'ny mpitatitra entana iraisam-pirenena hatreto tamin'ity taona ity. Na eo aza izany dia niato ny fakana bebe kokoa ny fangatahana hita tao anatin'izay 19 volana lasa izay.
• Nahita fifanarahana 2.1% ny mpitatitra entana afrikanina tamin'ny septambra 2018, raha oharina tamin'ny volana tamin'ny taon-dasa. Fanindiminy tamin'io tao anatin'ny fito volana no nifanarahana ny fangatahana. Ny fahaiza-manao dia nitombo 6.2% isan-taona. Taorian'ny tampon'ny fangatahana tamin'ny faran'ny taona 2017, ny volan'ny entana iraisam-pirenena nohavaozina tamin'ny vanim-potoana dia nijanona tsy nihena ary nihatsara indray tato anatin'ny volana vitsivitsy. Na izany aza, mijanona 6% ambany noho ny tampon'ny Novambra 2017 izy ireo. Ny fepetra fangatahana amin'ny tsena lehibe rehetra mankany / avy any Afrika dia mihena hatrany.